Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Uncedo lwe-GTRCMC lusendleleni yokubuyisela uKhenketho eHaiti
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseHaiti • Iindaba zeMpilo • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • abantu • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukubuyiselwa kwezoKhenketho eHaiti
IHaiti isengxakini emva kokubulawa kukaMongameli weli phondo, emva kweentlekele zendalo kunye ne-COVID, kunye nezolo inyikima ebulalayo kunye neyona nyikima yomeleleyo ibulale ama-724 ubuncinci.
Ukhenketho lwaseHaiti lunokucinywa okwexeshana, kodwa luhlale sisixhobo selizwe leCaribbean ukuba libuye kwakhona. Namhlanje, ummelwane ovela eJamaica, indoda eyaziwayo ukuba ingoyena mntu ukomeleza igama lokhenketho olwafikelela eHaiti, i-Hon. UEdmund Bartlett.
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, kunye noMsunguli weZiko loKomeleza uKhenketho kunye noLawulo lweNtlekele (GTRCMC), u-Hon Edmund Bartlett, uvakalisa inkxalabo malunga nefuthe elibi lendyikityha yesi 7.2 eyenzeke eHaiti.
NgoMgqibelo Agasti 14, inyikima enkulu eyi-7.2 yonakalise kakhulu izixeko ezininzi, ingcwaba abantu kwingqushu yezakhiwo ezidilikileyo kumacandelo eHaiti.
Ubuncinane abantu abangama-724 basweleka uninzi lwabo lungekho kwinto eseleyo eHaiti. I-US kunye namanye amazwe bathumele amaqela ophando ukuba ancede uRhulumente waseHaiti.
Ukuba inyikima yeli 7.2 ayonelanga, isitshingitshane esinokubulala iTropiki sijolise kweli lizwe leCaribbean ngoku.
“Ndiyavelana nesiqithi sethu iHaiti esiselumelwaneni njengoko sisothuka yintshabalalo ebangelwe yinyikima. Ezi ziganeko zemozulu zisibonisa ngakumbi nangakumbi, ukuba ilizwe elisengozini kwiCaribbean kufuneka likulungele ngakumbi ukulawula nokunciphisa xa zisenzeka, utshilo uMphathiswa waseJamaica uBartlett.
UBartlett uyalithanda ilizwe lakhe lokuzalwa eJamaica kunye nomsebenzi wakhe njengomphathiswa wezokhenketho welizwe. Nangona kunjalo, ulibonile ilizwe lezokhenketho ngeliso lehlabathi. Oku kuzise iJamaica kwindawo yokhenketho naphina emhlabeni.
UBartlett uqhubeke wathi: “Yiyo le nto I-GTRCMC yenzelwe ukunceda amazwe ekulungiseleleni nasekulawuleni ukuphazamiseka kwazo zonke iintlobo ukuze bangabinakho ukubuyela kwimeko yesiqhelo kodwa baphinde babenamandla.
“Njengenxalenye yemizamo yokubonelela ngenkxaso, i-GTRCMC izakudibana neenkokheli zommandla ukuba zihlangane ukuze zixoxe ngefuthe lwenyikima kwaye ziqwalasele iimpembelelo zokhenketho lweCaribbean, xa kuthathelwa ingqalelo ifuthe elibi eli elinalo kubomi, ekuziphiliseni, kwaye ekugqibeleni nokhenketho. ”Wongeze watsho uMphathiswa uBartlett.
IHaiti ifuna ngaphezulu kokukhangela amaqela kunye nenkxaso elungileyo. Ukhuseleko nokhuseleko ngumba omkhulu. Ngenxa yabavukeli abahamba ngeendlela ezikhokelela kwikomkhulu uncedo oluninzi olufunekayo alunakho ukuhanjiswa ngokufanelekileyo. Urhulumente waseHaiti ucele i-United States ukuba incede kule ngxaki yobupolisa, kodwa impendulo isalindelwe.
UPeter Tarlow, owaziwayo kwihlabathi liphela Ingcali yokhuselo nokhuselo kwezokhenketho, kunye nosihlalo we- Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi utshilo kusasazo lwe-eTN News namhlanje: “Ukhuseleko nokhuselo lokhenketho zingundoqo kuyo nayiphi na indawo ekuyiwa kuyo ukuze iphumelele. Uthungelwano lwezoKhenketho lweHlabathi kunye nendlela yethu yokufikelela ngokukhawuleza ikulungele ukusebenzisana noMphathiswa uBartlett kunye ne-GTRCMC ukunceda iHaiti xa belungile. ”
The Ukomelela kwezoKhenketho kwiHlabathi liphela kunye neZiko leNkathazo phantsi kobunkokheli boMphathiswa Wezokhenketho waseJamaica uBartlett zingaphezulu kwempendulo zeCaribbean kwiintlekele zengingqi, kodwa inyathelo lehlabathi kwinani elikhulayo leendawo zokhenketho.
IHaiti, eyahlaselwa yenye inyikima enamandla ngo-2010 eyabulala abantu abangaphezulu kwama-220,000, ikwalungiselela ukuhlaselwa yiTropical Storm Grace.
“Njengokuba besilungelelanisa ixesha elifutshane ukuya embindini wokhuphiswano lwentaba-mlilo eyenzeke eSt. Vincent naseGrenadines, i-GTRCMC izakube isisebenzisana namaqabane ethu engingqi kwindlela eya phambili,” utshilo uMlawuli oLawulayo we-GTRCMC, uNjingalwazi Lloyd Waller.
I-HEF Finance uthi:
Novemba 1, 2021 kwi-07: 47
IHaiti isengxakini emva kokuba umongameli weli dolophu wabulawa, emva kweentlekele zendalo kunye ne-COVID, kunye nezolo elibulalayo kwaye linamandla. I-Global Tourism Resilience and Crisis Management Centre iza kube iququzelela iindibano zabasebenzi kunye nenye inkxaso.